» छोटो समयमै सेयरबाट धेरै कमाएको सुनिन्छ ? घरमै बसी–बसी करोडपति बन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
सम्भोगको चाहना, सम्भोगअघिको उत्तेजना, सम्भोग गर्दाको अवस्था, स्खलन र त्यसपछिका मानवीय व्यवहार सेयरको बुलिस र त्यसपछिका प्रवृत्तिमा लगानीकर्ताले देखाउने व्यवहार सँग केही हदसम्म मिल्छ । जस्तो सम्भोगअघि आउने उत्तेजनामा मानिसहरूले सबै कुरा बिर्सन्छन् । सम्भावित जोखिम र स्खलनपछिको सिथिलतालाई उनीहरूले कत्ति पनि सोचेको हुँदैनन् । उनीहरूलाई केवल सेक्स चाहिएको हुन्छ । बजार बढ्दा वा बजार उत्तेजित हुँदा लगानीकर्ताले सेयर खरिदमा देखाउने व्यवहार त्यस्तै हुन्छ । यतिबेला लगानीकर्ताले बजार बढेपछि त्यो अवश्य घट्छ भन्ने प्राकृतिक नियम बिर्सन्छन् अनि जोखिमलाई बेवास्ता गरेर जुनसुकै कम्पनीको सेयर किन्न र जति पनि मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् । लगानीकर्ताले केवल पैसा, वृद्धि र नाफा मात्र हेर्छन् तर बजार घट्दा हुने शिथिलताप्रति कमैले मात्र ध्यान पुर्‍याउँछन् । साप्ताहिकबाट ।